Kitra – « Can 2019 » Resin’i Tonizia 3 no ho 0: mendrika tanteraka ny Barea na nitolefika aza | NewsMada
Mendrika tanteraka ary nanao ny ho afany tamin’ny fomba rehetra ny Barea teo amin’ny lalao ampahefa-dalan’ny Can 2019, natao tany Ejypta saingy nitolefika. Lavon’ny Voromaherin’i Tonizia tamin’ny isa 3 no ho 0 izy ireo, omaly tao amin’ny kianjan’i Al Salam Le Caire. Resy sy raraka am-boninahitra !
Ao anatin’izao fandraisana anjara voalohan’i Madagasikara amin’ny “Can” izao, lavo teo amin’ny ampahefa-dalana, nanoloana ny voromaherin’ny Carthage tonizia, tao amin’ny kianjan’ny Al Salam Le Caire, ny ekipam-pirenena malagasy, Barea. Isa 3 no ho 0 ny nisarahan’ny roa tonta. Na eo aza ny faharesena, tsy kivy ny Malagasy satria niady mafy ny maherifon’i Madagasikara, nanoratra tantara eo amin’ny sehatry ny baolina kitra afrikanina sy manerana izao tontolo izao ary nanandratra amin’ny faratampony ny voninahi-pirenena.
Raha hiverenana ny lalao omaly, nifandanja ny lalao nandritra ny ampaham-potoana voalohany, saingy nisy ny tandrevaka teny antsefantsefany teny avy amin’ny vodilaharana malagasy ka saika nahatafidiran’ny Tonizianina baolina maromaro, soa fa teo ny hakingan’i Adrien Melvin, mpiandry tsatoby malagasy, ka rava mora foana izany. Mbola nanana ny herijika hatrany ity mpiandry tsatoby an’i Barea ity, nandritra ny ampaham-potoana voalohany, ka voatazon’ny Malagasy isa sahala 0 no ho 0 ny ekipan’i Tonizia.
Nahazo aina ary nihanahazo hery ny ekipan’i Tonizia, tamin’ny ampaham-potoana faharoa, tetsy ankilany, niezaka nanohitra ny Malagasy, saingy hita fa efa tsy maharaka firy intsony ny herin’izay ireo, teny ambony kianja.
Baolina voalohany ho an’ny Tonizianina
Niditra ny baolina voalohany, ho an-dry zareo Tonizianina,teo amin’ny minitra faha 52, tamin’ny alalan’ny laharana faha-13, i Ferjani Sassi, rehefa voadonan’i Fontaine tamin’ny lamosiny ny baolina ka nampikobana ny harato. Tsy mbola kivy ny Malagasy fa nampitombo ny herijika, nanomboka nanova teknika ihany ny mpanazatra Nicolasa Dupuis ary nanolo mpilalao. Tsy nanaiky lembenana anefa ry zareo Tonizianina ka niditra indray ny baolina faharoa, teo amin’ny minitra faha-60, tamin’ny alalan’ny laharana faha-7, i Yourref Mskani. Niezaka nanarina ny lesoka, nanomboka teo ary tsy mbola very fanantenana, tsy nisy hirika nampidiram-baolina anefa satria efa nanomboka nanidy varavarana ny ekipan’i Tonizia. Tsy nionona tamin’io isa 2 io ihany koa anefa izy ireo fa mbola nanampy iray, 2 minitra tsy hifaranan’ny fe-potoana ara-dalàna, novonoin’i W.Khazri, laharana faha-10. Isa 3 noho 0, araka izany, ny nanilihan’ity ekipa goavana, laharana faha-25 eto Afrika ity ny Barea, laharana faha-108 eto Afrika. Valin-dalao tsy natao hampiondrika fa kosa hakana lesona amin’ny ho avy. Nisaotra ny Bare any vahoaka Malagasy !